Sida loo sameeyo gif gudaha GIMP | Hal-abuurka Online
Sida loo sameeyo gif gudaha GIMP
Encarni Arcoya | | Tababarada
Muddo ka hor ayaanu ku baray ku samee gif Photoshop, si gaar ah u isticmaalaya Illustrator, kaas oo ah barnaamijka kuu ogolaanaya inaad abuurto muuqaallo dhaqdhaqaaq leh. Iyo, markan, waxaan rabnaa in aan sidaas oo kale samayno ku bara sida loo sameeyo gif gudaha GIMP.
Haddii aadan haysan Photoshop oo aad rabto in aad isticmaasho barnaamij ku habboon hawsha, ama, qaar badan, xitaa ka sarreeya, sida GIMP, halkan waa tallaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad u gaarto.
1 Waa maxay GIMP
2 Sida loo sameeyo gif GIMP talaabo talaabo
2.1 Fur barnaamijka GIMP
2.2 Dooro, wax ka beddel oo koobiyi.
2.3 Lakabka cusub
2.5 La shaqaynta lakabka cusub
2.6 Kaydi animation
2.7 Khiyaamo dheeri ah oo lagu sameeyo gif GIMP
Waa maxay GIMP
GIMP dhab ahaantii waa a barnaamijka tafatirka sawirka taas oo, dad badan, la mid ah oo la mid ah sida Photoshop. Waxaa isticmaali kara labadaba isticmaalayaasha bilawga ah, oo leh aqoon dhexdhexaad ah iyo xirfadlayaal u heellan naqshadeynta garaafyada.
Laakiin qaybta ugu fiican ayaa ah in GIMP uu yahay barnaamij bilaash ah, taas oo ah waxa ka dhigay caannimada iyo in qaar badan ay ku dhameeyaan rakibaadda oo ay ku khalkhaliyaan sawiradooda si ay u abuuraan naqshadooda.
Hadda, marka la eego hawlgalkeeda, waxay noqotaa wax ka dhib badan Photoshop, maadaama aysan ahayn mid dareen leh, laakiin haddii aad u barato, waxaad samayn kartaa waxyaabo la mid ah sida Photoshop, iyo xitaa tayada wanaagsan.
Abuurayaasha GIMP waxay ahaayeen laba arday, Spencer Kimball iyo Peter Mattis, kuwaas oo, sida jimicsi semester ah oo ay ahayd inay ku soo bandhigaan naadiga kombuyuutarka ee Jaamacadda Berkeley, ayaa abuuray barnaamijkan, codsi bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala "guriga" iyo kuwa xirfadlayaasha ah.
Sidoo kale, Barnaamijku wuxuu ka sarreeyaa Photoshop dhinacyo gaar ah, sida kan noo horseedaya maqaalkan, sida loo sameeyo gif ee GIMP, sababtoo ah kan kale waxaan u baahanahay barnaamijkeeda ku lifaaqan, Illustrator, si aan u awoodno inaan sameyno. Dhanka kale, gudaha GIMP ma jiro barnaamij dibadda ah oo lagama maarmaan ah laakiin waan ku samayn karnaa.
Sida loo sameeyo gif GIMP talaabo talaabo
Ka dib markii aan wax yar ka ogaanno GIMP iyo sababta ay tahay inaad ugu rakibto kombuyuutarkaaga, waxaanu ku siin doonaa furayaasha si aad u abuurto gif barnaamijkan oo aad natiijooyin wanaagsan ka hesho. Dabcan, ka hor inta aanaan hoos ugu dhicin shaqada waxaa lagama maarmaan ah in aad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay gacanta, kiiskan wuxuu noqon lahaa:
Barnaamijka GIMP ayaa lagu rakibay kombiyuutarkaaga. Dhib malaha inaad isticmaasho Windows, Linux ama Mac, waxay diyaar u yihiin dhammaan saddexda nidaam ee hawlgalka iyo xitaa kuwa kale oo badan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay dhowr luqadood.
Sawirka ama sawirada aad u bedeli doonto gif Waxaad samayn kartaa wax fudud, oo leh hal sawir, ama waxaad isticmaali kartaa dhowr ka mid ah si aad u bedesho, nooc ka mid ah banner, kaas oo noqon kara wax aad u codsada macaamiisha dhexdooda. Maskaxda ku hay in sawirada aad la shaqaynayso ay ka yimaaddeen bangiyada sawirada ee bilaashka ah, ama aad lacag ku bixiso. Kaliya ha ka soo qaadanin interneedka maxaa yeelay waxa laga yaabaa in ay xuquuqdu leedahay.
Hadda oo aad haysatid dhammaan, aan bilowno
Fur barnaamijka GIMP
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la furo barnaamijka GIMP si uu ugu shaqeeyo kombiyuutarkaaga. Marka la furo, tag File / Open oo dooro sawirka aad la shaqaynayso.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad samaynayso GIMP waa Si fiican u isticmaal hal sawir oo daawo casharka oo dhan. Markaa waxaad ku samayn kartaa laba ama in ka badan oo sawir ah.
Dooro, wax ka beddel oo koobiyi.
Markaad haysato sawirka aad ku abuurayso gif, waxaad u baahan tahay inaad tagto Dooro / Dhammaan liiska. Maxay qabataa shaqadan? Waxaad yeelan doontaa sawirka la tilmaamay oo dhan, si ay ugu muuqato inaad gooynayso.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay tahay inaad sameyso marka xigta waa ku dhufo liiska Edit/Copy.
Ilaa hadda, gifku wali nolosha uma iman. Laakiin hadda laga bilaabo way dhici doontaa. Talaabada xigtana waa inaad tagtaa Liiska lakabka oo halkaas ka dooro Lakabka Cusub iyo, ka tago qiyamka soo baxay, aqbalo.
Ma xasuusataa nuqulkii aanu ku samaynay tallaabo hore? Tani waxay noo ogolaatay inaan koobiyayno sawirka oo dhan, oo hadda waxaan u baahanahay inaan "ku tuurno" lakabkan cusub. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad ku dhejisaa.
Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa furayaasha Control + V si aad u dhejiso ama aad u tagto liiska Edit / Paste. Tani waxay marka hore abuuri doontaa doorasho sabaynaysa, taasoo la macno ah inaan lagu xidhi doonin lakabka ilaa aad gujiso oo aad xidhato lakabka.
La shaqaynta lakabka cusub
Sawirku hadda wuu leeyahay laba lakab oo isku sawir leh. Si kastaba ha noqotee, waa lakabkan labaad ee aan ku shaqeyn doonno.
Maxaan sameyneynaa? Tag Liiska lakabka / Beddel / Si toos ah u rog.
Taasi waa, waxa aan samayn doono waa in ay u rogaan sawirka. Tusaale ahaan, haddii aad haysatid sawir ilmo ah oo gacantiisa bidix ku gacan haadinaya, adigoo si toosan u rogaya waxay u muuqanaysaa inuu gacantiisa midig ku lulaynayo.
Xigasho: Linux Lab
Waxaan ku dhow nahay inaan dhammeyno, sababtoo ah waxa noo haray waa inaan badbaadino. Oo waxaad u malayn doontaa, waxa ku saabsan animation? Xasilloon. Si aad tan u samayso waa inaad tagtaa File/Dhoofinta sida.
Waa inaad siisaa magac oo dooro kordhinta sida aad rabto inaad u badbaadiso, taas oo kiiskan noqon lahayd gif.
Shaashada soo socota ee soo bixi doonta waa inaad calaamee sanduuqa "Sida animation" oo dhig dib udhig u dhexeeya hal lakab iyo mid kale oo ah ugu yaraan 250 millise seconds. Waxaad bedeli kartaa waqtiga aad rabto iyo sida waafaqsan naqshadeynta aad rabto inaad abuurto.
Ugu dambeyntii, kaliya waa inaad riixdaa keydka waana la sameyn doonaa. Waxa kaliya oo loo dayn doonaa in la arko si loo sii wado ama dib loogu hagaajiyo (taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaadan xirin sawirka ama barnaamijka ilaa aad dib u eegto).
Khiyaamo dheeri ah oo lagu sameeyo gif GIMP
Kahor intaadan ka tagin mawduuca (inkasta oo haddii aad shaki ka qabto aad noogu dhaafi karto faallooyinka su'aalahaaga waxaanan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno) waxaan rabnaa inaan ku siino khiyaamo dheeri ah. Oo waa taas, Markaad sameyso animation waxaa laga yaabaa inaad rabto kaliya inuu dhaqaaqo hal mar. Ama ha noqoto mid soo noqnoqota.
Haddii ay tahay doorashadan labaad, waa inaad calaamadee sanduuqa "loop weligeed ah", mar haddii ay tahay midda ku soo noqnoqonaysa marar badan. Haddii kale, waxay sameyn doontaa dhaqdhaqaaqa hal mar waxayna ahaan doontaa mid taagan (oo si ay mar kale u guurto, waa inaad xirtaa sawirka oo aad dib u furto ama dib u cusbooneysiiso shaashadda).
Tani waxay noqon doontaa habka ugu aasaasiga ah ee lagu abuuro gif leh GIMP laakiin maaha ka kaliya. Dhab ahaantii, markaad tan si fiican u barato, waxaad isku dayi kartaa inaad abuurto gif sawir adiga oo ka dhigaya curiyeyaasha baaba'a (tusaale, sawir leh asal adag iyo tirooyin badan oo ku yaal). Iyo, xitaa aad u horumarsan, samee gif leh sawirro dhowr ah. Ma ku dhiiran lahayd inaad sii wadato?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo sameeyo gif gudaha GIMP
Noocyada magac bixinta